Custom DS1100-FDS1660 EPS Batch type pre expander Mpanamboatra sy mpamatsy | Dongshen
SPY90-SPY120 Mitohy Pre ...
PB2000V-PB6000V Vacuum karazana ...
PB2000A-PB6000A Air mangatsiaka ...
Ao anaty vakana manta EPS dia misy ny entona mitsoka antsoina hoe pentane. Aorian'ny fangotrahana dia manomboka mivelatra ny pentane ka mitombo ihany koa ny haben'ny vakana, izany dia antsoina hoe manitatra. Ny vakana manta EPS dia tsy azo ampiasaina hanamboarana sakana na vokatra fonosana mivantana, ny vakana rehetra dia mila velarina aloha vao manamboatra vokatra hafa. Ny hakitroky ny vokatra dia tapaka mandritra ny Preexpanding, ka ny fanaraha-maso ny hakitroka dia atao ao Preexpander.
Ny EPS Batch Pre-expander dia miasa mba hanitarana ny akora EPS ho amin'ny hakitroka takiana. Ny famenoana fitaovana sy ny fanitarana dia atao andiany isan-karazany, ka io dia antsoina hoe Batch pre-expander. EPS Batch Pre-expander dia karazana milina EPS mandeha ho azy, ny dingana rehetra dia mandeha ho azy toy ny famenoana ny fitaovana EPS, ny fandanjana, ny fampitana ny fitaovana, ny setroka, ny fanosehana, ny famafana, ny fanamainana ary ny fampitana ireo fitaovana nitarina.
Raha ampitahaina amin'ny Preexpander mitohy, ny EPS Batch Preexpander dia afaka manome density marina kokoa, fandidiana mora kokoa ary fitsitsiana angovo bebe kokoa.
Ny EPS Batch Pre-expander dia mameno amin'ny Screw Conveyor, ny rafitra fandanjana, ny mpandefa vacuum, ny efitrano fanitarana ary ny fandriana mipetaka amin'ny farafara.
EPS Batch tombony mialoha tombony
1.Batch Preexpander dia mandray ny Mitsubishi PLC sy ny efijery mikasika Winview hifehezana ny fiasan'ny mandeha ho azy;
2.Batch Preexpander mampiasa rafitra banga hampitana akora manta hatrany ambany ka hatrany ambony, tsy misy fantsom-pantsakana manakana ary tsy misy vakana EPS vaky;
3.Amin'ny maodelin'ny milina sasany, misy mpamadika roa voalohany hamenoana amin'ny fomba hafa, fitsitsiana hery ary famenoana haingana;
4.Machine fanitarana voalohany sy fanitarana faharoa dia samy mampiasa metatra fandanjana elektronika PT650 hifehezana ny fandanjana, ny marina amin'ny 0.1g;
5.Machine dia mampiasa valiny fampihenana ny tsindry japoney mba hiantohana ny fidiran'ny etona azo antoka;
6.Machine miaraka amin'ny preheating sy steaming main. Mampiasa valizy kely hanaovana preheating mandra-pahatongan'ny maripana sasany avy eo anaovana fanafanana lehibe, ka azo aitatra tsara ny fitaovana;
7.Mifehy fanaraha-maso ny etona sy ny tsindry rivotra ao anaty efitrano fanitarana, ny fandeferana amin'ny hakitroka ambany noho ny 3%;
8.Ny hazo mihetsiketsika sy ny efitrano fanitarana anatiny dia vita amin'ny SS304;
9.Valide proportional vale, valizy proportional rivotra ary sensor sensor vibration Koreana dia tsy voatery.
Unit FDS1100 FDS1400 FDS1660
Efitra fanitarana savaivony MG Φ1100 Φ1400 Φ1660
boky m³ 1.4 2.1 4.8
Volume azo ampiasaina m³ 1.0 1.5 3.5
etona teny santimetatra 2 '' (DN50) 2 '' (DN50) 2 '' (DN50)
fihinanana Kg / tsingerina 6-8 8-10 11-18
tsindry Mpa 0.6-0.8 0.4-0.8 0.4-0.8
Rivotra voafintina teny santimetatra DN50 DN50 DN50
fihinanana m³ / tsingerina 0.9-1.1 0.5-0.8 0.7-1.1
tsindry Mpa 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8
Drainage Seranan-tsambo ambony santimetatra DN100 DN125 DN150
Eo ambanin'ny seranan-tsambo santimetatra DN100 DN100 DN125
Eo ambanin'ny seranan-tsambo famoahana santimetatra DN80 DN80 DN100
Famindrana 4g / 1 230g / h 4g / 1 360g / h
Andalana mampita fitaovana santimetatra 6 '' (DN150) 8 '' (DN200) 8 '' (DN200)
fahefana Kw 19 22.5 24.5
hakitroky Kg / m³ 10-40 4-40 4-40
Fandeferana amin'ny fahasembanana % ± 3 ± 3 ± 3
Refy ankapobeny L * W * H MG 2900 * 4500 * 5900 6500 * 4500 * 4500 9000 * 3500 * 5500
Lanja Kg 3200 4500 4800
Haavo ny efitrano takiana MG 5000 5500 7000
Teo aloha: SPY90-SPY120 Mpanaparitaka mitohy
Manaraka: Tetikasa EPS Raw Material